Puntland oo dib u fasaxday doorashadii xubnaha Aqalka hoose ee ka socotay Garoowe (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Puntland oo dib u fasaxday doorashadii xubnaha Aqalka hoose ee ka socotay Garoowe (AKHRISO)
Maamulka Puntland ayaa ugu dambeyn dib u fasaxay doorashada xubnaha Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka socotay magaalada Garoowe, kadib cadaadis kaga yimid beesha caalamka.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Puntland oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe ayaa xaqiijiyay in la fasaxay doorashada Aqalka hoose ee ka socotay magaaladaas, islamarkaana maalinta Axada ah ay doorashada dib u bilaaban doonto.
Maalinta Axadda ayuu guddigu sheegay in la dooran doono 7 kursi oo ka mid ah 16 kuraas ee ka harsanaa 37 kursi.
Si kastaba, arrintaan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay kadib markii beesha caalamka ay cadaadis xoogan ku saartay madaxda maamulka Puntland inaysan ku gor-gortamin qabashada doorashadaasi xubnaha Aqalka sare ee uu muranka ka taagan yahay, kuwaas oo kasoo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag.
Puntland ayaa hakad gelisay doorashadii ka socotay magaalada Garoowe iyo deegaanada kale ee ka taliso, kadib markii ay sheegtay in xildhibaanada Aqalka sare ee gobolada Sool iyo Sanaag aan lagu dooran karin magaalada Muqdisho islamarkaana lagu doorto magaalada Garoowe.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka socdo doorashada xubnaha gobolada waqooyi ee Soomaaliya u matalaya Aqalka hoose, inkastoo doorashada tan Aqalka Sare ay haatan hakad ku jirto.